Snapdragon, iwu nke na-eto site na mkpụrụ: mgbe na otu esi akụ antirrinum n'ụzọ ziri ezi - Mkpụrụ ubi - 2019
Iwu na oge nke ịdakwasị ụda
Ọ bụrụ na ị tụụrụ ime ka imepụta nke ọdịdị ala gị na osisi ndị toro ogologo na ogologo ị ga-enwe, nke ga-apụta megide ọdịdị nke ihe ndị dị ala, na-atụgharị uche gị na ifuru a na-akpọ snapdragon. Ihe edere n'isiokwu a na-etinye aka n'omume ọma nke okooko osisi ndị a na iwu ndị bụ isi maka ilekọta ha.
Mgbe kere snapdragon
Otu esi akụ mkpụrụ snadradra: ntuziaka nzọụkwụ
Ịgha mkpụrụ snadradra
Mbido na ala oghe
Ụkpụrụ ifuru na-edozi isi
Akwụsị ọrịa na pests
Kedu otu esi eji aka nakọta mkpụrụ nke snapdragon
Snapdragon - shrub-shrub or herb straight, slightly branching thin-stemmed stems, ogologo ya dị iche site na 10 cm 1 m. Ohia nke osisi a ọdịdị yiri pyramid. A na-edozi akwụkwọ ndị dị n'elu na usoro ọzọ, ndị na-etinye na ala bụ ndị na-emegide. Ụdị ha dị ka okwute-ma ọ bụ ogologo oge ọ bụla, agba dịgasị iche iche na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ greenred na-acha ọbara ọbara.
Ị ma? Snapdragon achọpụtala ngwa ngwa na nkà mmụta ọgwụ. A na-eji broths, napara, infusions na teas na-agwọ ọrịa dị iche iche nke imeju, akụkụ eriri afọ na akụkụ iku ume.
Okooko ndị a nwere ezigbo ísì. Ha buru ibu ma buru ibu, udi abuo, ha nwere ike buru ma obu ihe di mfe. Inflorescence - ịgba. Ụcha nke okooko osisi nwere ike ịcha ọcha, pink, odo, ihe ndo ọ bụla. Enwere kwa ala ndi nwere ike igosi otutu agba n'otu oge. Mkpụrụ a na-anọchite anya mkpụrụ osisi ọtụtụ mkpụrụ, nke nwere mkpụrụ nke puku isii.
Mee ka ndị dị iche iche dị elu karịa ebe a na-eji akwa snapdragon.
Iji nweta ihe kacha mma, ọ bara uru ịmara oge akuku nke osisi na-emeghe n'ala, ma ọ bụ iji gbanwee oge ịgha mkpụrụ nke osisi, dabere na usoro ịgha mkpụrụ ị họọrọ. Enwere ike ịchọta ịmatakwu gbasara usoro na ọnọdụ nke ịbịaru na ngalaba a.
Iji usoro a ekwenyeghị nkwa ọma, karịsịa ma ọ bụrụ na ịnọ na ihu igwe oyi. Otú ọ dị, n'ógbè ebe ndịda, ị ga-agbalị ịgha mkpụrụ ahụ na-emeghe oghere n'ime etiti April - mmalite May. Mkpụrụ nke pharynx ọdụm na-eguzogide oyi na-eguzogide ma nwee ike ịnarị ọbụna obere mmiri mmiri.
Ọ dị mkpa! A na-arụ mkpụrụ kachasị mma mgbe nkezi ikuku okpomọkụ kwa ụbọchị karịa + 7 ... + 10 Celsius. Ikwenye na iwu a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% nkwenye na ha nwere ọganihu germination.
Ịgha mkpụrụ nke seedlings na-enye ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na ya, n'ihi na osisi ahụ, ebe ị na-elekọta ya na mmiri ọkụ, nwere oge iji nwetawanye ike ma nwekwuo ahịhịa vegetative, bụ nke ga-enyere ya aka iji wusiwanye usoro mmepe na mmepe. Oge kachasị mma maka ịkụ osisi na-emeghe ala a na-ewere na ọ bụ n'etiti ọnwa May - mmalite June. Kwa ụbọchị okpomọkụ kwesịrị ịdị gburugburu + 19 ... +22 Celsius. Mkpụrụ osisi nwere 4-5 ezi (ọ bụghị cotyledonous) epupụta a kpụrụ, ike azuokokoosisi na-atụle kwesịrị ekwesị maka transplanting n'ime oghe n'ala. Ihe di mkpa maka oganihu nke oma bu na enweghi ihe iriba ama nke oria di iche iche nke oji ma obu akwukwo, nchighari nke akwukwo, ebe ozo, wdg. O ga-abakwa uru tupu akuku n'ime ebe kwesiri ntukwasi obi iji mee ka osisi di ike, tinye ya n'èzí ruo nwa oge.
N'ozuzu, ọ dịghị ihe ọ bụla dị iche na nke a kapịrị ọnụ na usoro nke na-eto eto seedlings na transplanting snapdragons n'ime oghe ala. Mana enwere otutu nuances nke kwesiri ilebara uche gi anya, n'ihi na ndi na-eto eto nwere ike enweghi mgbe ha maara banyere ha n'ihi nsogbu nke osisi a di na mpaghara anyi. Nkọwa gbasara ha - n'okpuru.
Na-agụkwa banyere okooko osisi ndị dị otú ahụ dị ka sundew, passionflower, nepentes, orchis, hoya, camellia na amorphofallus.
Ịhọrọ mkpụrụ osisi dị mma bụ akụkụ dị mkpa nke inwe ọganihu nke ọganihu ọ bụla na-adabere n'ọtụtụ dị ukwuu. Mgbe ị na-ahọrọ osisi, gee ntị na njikọta nke usoro ha: ha ekwesịghị ịmepụta ma ọ bụ ihe ọkụkụ na-emechi;
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ nke ọdụm ọdụm na-anọgide na-adịgide adịgide maka afọ 1-2 naanị mgbe a richara ha, ya mere, mgbe ị na-azụ mkpụrụ, gee ntị na ndu ndụ.
Ọ dịkwa mkpa ịgha mkpụrụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndị na-enweghị mkpụrụ tupu oge eruo, n'ihi na ha ga-egbochi mkpụrụ osisi dị mma site na ịmalite ịghọ osisi ndị dị mma ma nwee ike ịghọ ihe na-akpata nje na ọrịa. Iji mee nke a, buru otu iko nke ntakịrị mmiri ọkụ ma tinye mkpụrụ n'ime ha: ndị nwere ike ịdakwasị ala nwere ike iji mee ihe maka ịkụ ihe, a ghaghịkwa ịchụpụ ndị na-abịa.
Kwadebe igbe na ala tupu agha, ọ bụ na-achọsi ike na ala-abụ nke ìhè na rụrụ iche. Ekwesiri ịzụta ala dị gị mkpa, dịka mkpụrụ osisi peat, nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa ọ bụla. Na ọkpụrụkpụ nke ala oyi akwa kwesịrị banyere 10-15 cm.
Mgbe ahụ, n'ala na pensụl na-esetịpụ otu uzo dị omimi nke 1.5-2 cm, nke ọ bụ ọnụ ahịa nke osisi. Eziokwu dị mkpa iji mee ka ọ bụrụ na ị ga-enwe ọganihu. N'ebe dị anya n'etiti grooves kwesịrị ịdịkarịa ala 7-10 cm.
Na-esote, jupụta nro n'elu ala ma wụsa mmiri ka ị wee nwee ike elu n'elu 2/3 nke ala akwa.
Osisi, ruo mgbe mbụ Ome, kwesịrị kpuchie na iko mpempe akwụkwọ ma ọ bụ plastic wrap. A ghaghị ịnọgide na-ekpo ọkụ ọkụ, ebe okpomọkụ kachasị mma maka ọganihu na mmepe ya bụ + 22 ... + 24 Celsius. Ọ na-achọsi ike na igbe ndị ya na ya nwere ìhè anyanwụ dị ka o kwere mee. Dị ka ihe ọzọ na ọkụ ọkụ, ị nwere ike iji oriọna ultraviolet.
Ịgbara na-eto eto seedlings kwesịrị mere ka ala dries 2-3 cm miri. Jide n'aka na ala ala akọrọ, ị nwere ike, ma ọ bụrụ na ị na-arapara na igbe na mkpịsị aka ma ọ bụ pensụl. Mgbe akwukwo akwukwo mbu di na osisi ahu, a ghaghi kuru osisi n'ime ite di iche iche. Ọ dị ezigbo mkpa ime nke a ma ọ bụrụ na ndị ahụ na-eto eto na-arịwanye elu ma osisi anaghị enwe oke ohere maka mmepe nkịtị. Mgbe mmepe nke 4-5 ezigbo epupụta, ọ ga-adị mkpa ịkụnye mkpịsị aka nke osisi ọ bụla na-eto eto. A ghaghị ime otu a n'akụkụ, ma ọ bụrụ na ị hụ na ha na-eto eto karị. Malite na ụbọchị mbụ nke May, ọ ga-abụ ihe bara uru ime ka ọkụ ahụ dị ntakịrị, tinye ya na mbara ihu ma ọ bụ n'èzí nke 10-15 minit.
E nwere ike ịmalite ma ọ bụ tinye ya n'anyanwụ mgbe niile. Ọ bụ naanị ihe dị mkpa iji nlezianya nyochaa na ọ dịghị mmiri mmiri na-erugharị, ebe ọ bụ na snapdragon nwere ọchịchọ ịmalite ọrịa dị iche iche. Ọ dịghị mkpa ịkụ osisi ahụ n'elu ebe ndị na-emepe emepe, dị ka n'okpuru ifufe na nkọwa ya, okooko osisi ya ga-agwụ agwụ.
Ala kacha mma maka snapdragon ga-abụ ngwakọta nke peat, ájá na compost dị na 1: 1: 1. Kụrụ seedlings kwesịrị ịbụ ndị a: ogologo nnochite anya - na anya nke bụghị ihe na-erughị 0,5 m onye ọ bụla ọzọ, ọkara-sized iche - ọ bụla 30 cm, obere iche - na nkeji nke 20 cm, dwarf - ọ dịkarịa ala cm 15. A na-arụ ọrụ kachasị mma na ala nke ụwa. Oghere nke transplantation kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 20 × 20 cm n'ịdị. Akuku osisi ekwesịghị ịghagharị n'ime ala, ebe snapdragon anọwo na-eto eto maka afọ 5 gara aga, n'ihi ike ọgwụgwụ ala, nakwa nkwụ ndị nwere ike ịnwụ na ya. na dịkwa ka usoro nke osisi a.
Ọnụ ọdụm adịghị mma na nlekọta ya, na, n'ozuzu ya, ọ bụghị dị iche iche na-achọsi ike site n'ọtụtụ ndị nnọchianya ndị ọzọ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ụzọ aghụghọ na ị gaghị emerụ ahụ ịma ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye aka n'ịzụlite ya.
Ala, nke snapdragon na-etolite, kwesịrị ịtọpụ na iwepu ahịhịa. Okooko a na-adaba na ata di iche iche nke oma, ya mere i ghaghi ikpochapu ma obu ihe di omimi 0,5 m gburugburu ya site na osisi ndi a choro.
Ị ma? Mba ọ bụla na-ahụ osisi a ihe nke ya. Dịka ọmụmaatụ, ndị Britain na-akpọ ya "snapdragon", n'ihi na ha dị ka dragon nke meghere ọnụ ya.
A na-arụ ọrụ kachasị mma n'echi ya mgbe atọ na iwepu ahịhịa. Na usoro nke ime usoro a, ọ gaghị adị oke mma ịdọpụsị mkpọrọgwụ nile nke ata ahụ iji gbochie mmepụta ha ọzọ. Akwụpụla ala nke ọma, dịka nke a nwere ike imebi mgbọrọgwụ dị elu nke ifuru. Ọ ga-ezuru loosening 3-5 cm miri.
Ọ dị mkpa ka ifuru mmiri a na-eme ka ọ bụrụ naanị mmiri na-ekpo ọkụ, ọbụnadị mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ bụghị mmiri ozuzo na-erughị izu abụọ. Mmiri mmiri dị obere - naanị 3-5 lita n'okpuru ọhia ọ bụla. Nanị ọnọdụ maka ịgbara bụ na a pụghị ime ya n'abalị, n'ihi na dịkwa ka usoro nchịkwa ndị dị n'elu elu ala nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ n'oge abalị na ájá ájá ma mee ka ọrịa ahụ too na osisi ahụ.
Mụta otú e si emeso nchara, kwụsịkwa ịwakpo ọta ụgha.
N'ime ọrịa ndị ahụ, snapdragon bụ ihe kachasị emetụta na nchara nchara, septoria, blackleg, na isi awọ ma ọ bụ ire ere. Nanị ọgwụgwọ zuru oke nke ọrịa ndị a ga-abụ mbibi ozugbo nke akụkụ nile nke osisi ahụ (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, bibie osisi niile) na nhazi ndị ọzọ fọdụrụnụ na ngwọta nke ụfọdụ fungicide.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ejikwa kemịkal, mee ihe niile ị ga-eme nlezianya ma jiri nlezianya soro ntuziaka maka iso ha rụọ ọrụ.
N'ime ụmụ ahụhụ, osisi ahụ na-ebutekarị ụmụ ahụhụ, caterpillars, fly larvae na butterflies dị iche iche itinye nsen na okooko osisi. Iji zere ọdịdị nke ndị ọbịa dị otú ahụ na agba gị, na-eduzi ọgwụgwọ mgbochi na ngwọta dị iche iche nke ụmụ ahụhụ ma ọ bụ ndị na-ere ahịa, nke dị na ahịa n'ọtụtụ dịgasị iche iche.
Mkpụrụ nke ifuru a ga-egbute na oge nke ezughị okè, iji tinye ha n'ọnọdụ dị mma nke ha nwere ike chara n'onwe ha. Maka nke a, ị ga-ewepụ akpa akwụkwọ akpa n'okpuru eriri. Malite nchịkọta mkpụrụ n'oge ịmalite mkpụrụ osisi na oghere osisi nke peduncle. A ghaghị iwepụ mkpịsị elu nke peduncle, ebe ọ bụ na mkpụrụ osisi ndị dị na ya ka na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, a na-etinyekwa ihe dị na akụkụ ala ya ma debe ya na ncha.
Nakọta mkpụrụ nke cactus, beet beet, ike, buzulnik, bishọp, hamedoreia, stockroses, thuja, zinnia na alstroemeria.
Mgbe ahụ, a ga-egbutu osisi ndị nwere ngwugwu na ha ma gbuo ha n'ala n'ime mmiri nke ọma, nke akọrọ, ụlọ dị ọkụ ka osisi ndị na-eto eto wee daba n'ime akpa ahụ. Mgbe a na-agbanye osisi niile, ha ga-ebufe ha n'ime igbe ma ọ bụ akpa akwụkwọ ma hapụrụ echekwara na ebe akọrọ na-enweghị ike imebi ụmụaka na ụmụ anụmanụ, na okpomọkụ adịghị ala karịa + 5 ... + 7 Celsius. Ya mere, anyi nwere olile anya na isiokwu a enyerela gi aka imuta ihe banyere akuku na ilekọta osisi dika snapdragon. Atụla egwu ịnwale n 'ime ihe odide obodo, chọpụta ọhụụ dị iche iche na agba akwụkwọ, zụlite ụdị ihe ọkụkụ dịgasị iche na iche iche - nke a ga-eme ka ị nwee ike ịma mma, ubi gị ga-enwe obi ụtọ ọ bụghị nanị ezinụlọ gị, kamakwa ndị gbara gị gburugburu.
"Metronidazole": ntụziaka maka iji anụ ọkụkọ
Mbibi ụwa! "Global" site na ncha akwa
Kedu esi kụziere ndị na-aṅụ mmanya na-egbu egbu
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Iwu na oge nke ịdakwasị ụda